चीनसँग महानताको परिचायक बन्ने परम्परा नै कायम रहँदै आएको छ । जसलाई प्रतिविम्बित गर्न ‘ग्रेट वाल अफ चाइना’ लाई लिन सकिन्छ । त्यसको साथै भव्य राजकीय शैलीयुक्त ठूल्ठूला विभिन्न ठाउँमा रहेका दरबारलगायतका मानवनिर्मित भवनले पनि चिनियाँ महानताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्राचीन चिनियाँहरूमा एक किसिमले ठूल्ठूला निर्माण क्षेत्र बनाउने लत नै बसेको विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले देखाइसकेका छन् ।
विशेषतः आधुनिक चीनको आर्थिक क्रान्तिले विश्वमा हरेक तवरबाट वर्चश्व कायम गर्न खोज्ने प्रयासलाई त्यहाँको महानताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसर्थमा पनि चिनियाँहरू आफूलाई महान बनाउन नथाकेका हुन् । उनीहरू ठूल्ठूला निर्माण क्षेत्रको कार्यलाई कहिल्यै पनि बन्द गरेको अवस्था छैन । दुई वर्ष पहिले चीन सरकारले देशको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि राहत योजनाका रूपमा ४ ट्रिलियन युआन घोषणा गरेपछि, त्यहाँका जनताहरूले परम्परागत रूपमा कायम रहँदै आएको जहिले पनि ठूला र विश्वसमुदायीलाई आश्चर्य चकित तुल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । जसका केही ज्वलन्त प्रतिविम्बहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्
१. चार घन्टामै बेइजिङ–सांघाई रेलयात्रा
वर्षौं पहिलेदेखि अपेक्षा गरिएको बेइजिङ–सांघाई उच्च गतिको रेलवे सेवा आखिरमा सन् २०१०, नोभेम्बर महिनामा पूर्णता पायो । यो रेलवे लेन निर्माण परियोजना सन् २००८, अप्रिल १८ तारिखबाट सुरु भएको थियो । चिनियाँ महानताको प्रतिविम्बका रूपमा रहेको बेइजिङ–सांघाई रुट जोड्ने रेलवे लेन निर्माण अवधिमा झन्डै १ लाख ३५ हजार मानिसले रोजगारी पाएका थिए । उक्त रेलवे लेनको दूरी १ हजार ३ सय १८ किलोमिटर छ । जसको निर्माण लागत ३३.२९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।
२. प्रदर्शनी पार्क जीवन्त भयो
गत वर्षको मे महिनाबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको सांघाई विश्व प्रदर्शनी ‘राम्रो सहर, राम्रो जीवन’ को नारासहित ६ महिनासम्म चलेको थियो । जसले एकै पटक विश्व समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको पार्कको दृश्यबाट विश्व समुदायलाई नै आकर्षित गरेको थियो ।
उक्त प्रदर्शनी पार्कको निर्माण कार्य सन् २००६, अगष्ट महिनाबाट सुरु गरिएको थियो । पार्कले जम्मा ५.२८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
३.नयाँ भूमिगत सहर
बेइजिङको डोङचेङ जिल्लाले आगामी २० वर्षको अवधिमा ८ वर्ग किलोमिटरयुक्त नयाँ भूमिगत सहर (अन्डरग्राउन्ड सिटी) बनाउने भएको छ । जसमा सपिङ मलको साथै भूमिगत सडकको पनि व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
चिनियाँ महानताको परिचायक भूमिकामा अगाडि देखिएको उक्त भूमिगत सहर बनाउने बृहत् महत्वकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन गत वर्षको जनवरी महिनाबाट भएको थियो । बेइजिङको स्थानीय डोङचेङ सरकारले भूमिगत सहरको आकार तीन तलायुक्त रहने दाबी गरेको छ ।
४.एसियाली खेलकुदको सहरः गोन्जाउ
दुई वर्षभन्दा लामो समयअवधिको निर्माण कार्यपछि अन्त्यमा चीनको दक्षिणी गोन्जाउ खेलकुद सहरको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । उक्त सहरमा गत वर्षको नोभेम्बर १२ देखि २७ सम्म चलेको १६ औं एसियाली खेलकुदमा विश्वभरिका विभिन्न समूहका खेलाडी, कोच, प्राविधिक अधिकारी तथा सञ्चारकर्मी लगायतका ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता थियो ।
उक्त सहरमा १३ अपार्टमेन्टयुक्त भवनको साथै सञ्चार ग्राम, प्राविधिक अधिकारीहरूको ग्राम, इन्टरनेसनल ब्रोडकाष्ट सेन्टर तथा मुख्य सञ्चार केन्द्र लगायतका क्षेत्र छन् ।
५. मेगा आणविक लगानी योजना
चिनियाँ महानताको प्रतिविम्बका रूपमा आणविक शक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा कम्पनी ‘चाइना नेसनल न्युक्लियर कर्पोरेसनले आगामी सन् २०२० सम्म आणविक परियोजनामा १ सय १७.६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । जसले देशको औद्योगिक क्रान्तिलाई टेवा पुग्नेछ ।
६. चीनको सबैभन्दा लामो भूमिगत रेलवे सेवा सुचारु हुने
आर्थिक विकासमा उल्लेख्य फड्को मारेका चिनियाँहरू विश्व समुदायलाई चकित पार्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । बेइजिङको दक्षिण–पश्चिमदेखि उत्तरपश्चिम क्षेत्र जोड्ने हालसम्मकै चीनको सबैभन्दा लामो भूमिगत रेलवे सेवा छिट्टै सुरु हुने बताइएको छ । त्यसको साथै उक्त भूमिगत रेलवे जोड्ने नयाँ ‘लाइन ४’ नामक रेलवे लेन २२.५ किलोमिटरसम्म विस्तार बताइएको छ, जुन बेइजिङको दक्षिणी रिङरोडमा मिसिनेछ ।